Apple က iWork ကိုမွမ်းမံသည် ငါက Mac ပါ
Jordi Gimenez | | Apple, Mac OS X ကို
အက်ပဲလ်ဟာ OS X မှာ iWork suite အတွက် update အသစ်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ရုံနဲ့ iOS မှာအသုံးပြုသူများအတွက်လည်းအလားတူလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ နောက်ဆုံး 16 အောက်တိုဘာလ Apple ကရုံးသုံး application applications တွေကိုအချိန်အတော်ကြာမှ update လုပ်ခဲ့တယ် စာမျက်နှာများ, နံပါတ်များနှင့် Keynote ။
Microsoft ၏ suite ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောအသုံးပြုသူများအားမျှော်လင့်ချက်အနည်းငယ်ပေးသောကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော update နှင့်တစ်လနီးပါးအကြာတွင်ပုံမှန် update bug fixes များထည့်သွင်းထားသောနောက်ထပ် update တစ်ခုနှင့်အချို့ အချို့သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်သဟဇာတမဖြစ်ခြင်းပြproblemsနာများ Microsoft က Office ကို.
ဤရွေ့ကားဤအတွက် applications များ၏တိုးတက်မှုဖြစ်ကြသည် Mac အတွက်စာမျက်နှာ ၅.၆.၁:
အချို့သော Microsoft Word စာရွက်စာတမ်းများကိုဖွင့ ်၍ မရပါ
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်တိုးတက်လာသောတိုးတက်မှုများနှင့်အတူလိုက်သွားသည် Mac အတွက်အဓိကဗားရှင်း ၆.၆.၁:
master slides ပေါ်ရှိ link များပါ ၀ င်သောတင်ဆက်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပြissueနာကိုဖြေရှင်းသည်
နောက်ဆုံးတော့ Mac အတွက်နံပါတ် ၃.၆.၁ အောက်ပါတိုးတက်မှုများကိုထပ်ထည့်ထားသည်။
အချို့သော Microsoft Excel စာရွက်များကိုမဖွင့်ရန်တားဆီးသည့်ပြissueနာကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်
နောက်ဆုံးသတင်းများကိုအမြဲတမ်းကြိုဆိုပါတယ်၊ ဒီတစ်ကြိမ်မှာ application တစ်ခုစီအတွက် version အသစ်တစ်ခုပါ Mac နှင့် iOS တို့တွင် iWork စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးတက်စေသည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » Apple က OS X နှင့် iOS အတွက် iWork suite ကို update လုပ်သည်
အဲဒီအမှားတွေကိုပြင်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်အချိန်မှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုတွေ့ရမလဲ။ သူတို့ကအတူတူနှင့်အတူ ... နှစ်ပေါင်းအသွင်အပြင်ကိုလန်းဆန်းဘူး!
အိုင်ယာလန်တွင် Apple မှ ၀ န်ထမ်း ၁၀၀၀ ထပ်တိုးမည်